Ikhaya STARS E-EUROPE I-Marquinhos Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
I-Marquinhos Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts (Isikweletu kuMarca no-IG)
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola leGhola elibizwa ngokuthi "I-Marquinhos". Indaba yethu ye-Marquinhos Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sokuzalwa kuze kube manje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngomsebenzi wakhe futhi asebenza kahle ekuvikeleni eyodwa. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abheka uMarquinhos 'Biography okuthakazelisayo kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala ukuphuma, uMarquinhos (u-crystal UMarcos Aoás Corrêa) wazalwa ngosuku lwe-14th lukaMeyi 1994 eSão Paulo, eBrazil. Wazalwa nonina u-Alina Aoás noyise u-Marcos Barros Corrêa.
Abazali bakaMarquinhos uMarcos Barros no-Alina Aoás. Amakhredithi: Instagram.
UMarquinhos osemusha wakhuliswa edolobheni likaMasipala waseSão Paulo okuyinto eyaziwa ngokuthi yinhloko yebhola leBrazil. Lo mdlalo uneminyaka engamashumi eminyaka, uzinzile ngokwendlela yokuphila yabakhileyo bomuzi kubandakanya umama kaMarquinhos obuka ukubukeka Arena Korinte ngisho nalapho ekhulelwe i-prodigy yebhola.
UMarquinhos wahlonipha i-Arena Korinte esiswini sikanina ngaphambi kokubeletha. Amakhredithi: Instagram
Ngakho-ke akumangalisi ukuthi uMntwana Marquinhos waqala ukudlala ibhola ngokushesha nje lapho ehamba khona. Ekhulela emndenini ophakathi noLuan Aoás, noDadewabo Aoás, uMarquinhos udonsela emdlalweni webhola, hhayi ukuhlangabezana nezidingo zezimali zomndeni wakhe esikhathini esizayo kodwa ukufeza lokho ayekubona ekuqaleni. Akumangalisi ukuthi uMarquinhos owasungulwa kamuva wathi ngemva kwalokho:
Kusukela ngisemncane, ngangifisa ukuba ngumdlali webhola. Ngisebenzele kanzima ukufika lapho ngikhona namuhla, ngiye ngavikela amakilabhu amakhulu futhi ngizokwenza okungcono kakhulu kimi, ngamandla nangomona. Ikusasa alikho imikhawulo, ngizoqhubeka ngiqhubeka.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
Ngenkathi uMarquinhos akhulela eSão Paulo, wayenomzala odumile, I-Moreno Aoas Vidal owayengaleso sikhathi, umdlali obhekene nezinhlelo zentsha yeqembu lebhola elikhulu laseSão Paulo - abaseKorinte. Kwakuyimpumelelo ka-Moreno e-Korinte eyaphefumulela uMarquinhos nomfowabo omdala uLuna ukuba bajoyine uhlelo lwezintsha leqembu ngenkathi lowo owayengumdala engu-8 kuphela.
UMarquinhos wayeneminyaka eyi-8 ngesikhathi ejoyina abaseKorinte. Amakhredithi: Instagram.
Kungaba mnandi ukuqaphela ukuthi uMarquinhos akazange abe ngumvikeli njalo. Ikhono lebhola liqale ngokushintsha phakathi kokugcinwa kwemigomo nokukhonza njengesikhundla somvikeli ngenkathi ifunda eSolesian College of Santa Teresinha eSão Paulo, ngaphambi kokujoyina abaseKorinte ku-2002.
"Wayethanda ukukhonza njengomgcini wezinhloso. Uphinde wadlala njengomdlali wokuzivikela, kodwa noma nini lapho enquma ukukhonza njengomgcini wegagasi wayehlale ekhethwa njengokhetho lokuqala lomsebenzi ". Ukhumbula u-Adalberto de Oliveira Barbosa, umxhumanisi wezehlakalo zezemidlalo nezeDancing.
Isithombe esinezingane ezincane zobungani beMarquinhos njengomgcini wezinhloso. Amakhredithi: Instagram.
Okuthakazelisayo nakakhulu ukuthi uMarquinhos wayebhekwa njengabazali bakhe kanye nomqeqeshi ukuba abe mncane kakhulu phakathi kwabazalwane bezemidlalo (uLuna no-cousin Moreno). Kodwa-ke, wathola amakhono akhe futhi wakhula ngenkathi edala umsebenzi ohlelweni lwezintsha zaseKorinte.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Buildup
I-Marquinhos 'iphakama phakathi kwamaKorinte yafinyelela ezindaweni eziphakeme ezivela ku-2011 lapho eyingxenye yeqembu laseBrazil elincane eliphumelele i-2011 South American Under-17 Football Championship futhi liqeqeshelwe iFIFA ngaphansi kwe-17 World Cup.
I-Marquinhos e-Korinte ku-2011. Amakhredithi: Ezemidlalo Zomhlaba Wonke.
Ukuzibandakanya okuqhubekayo nabaseKorinte babona uMarquinhos enza iqembu lakhe lokuqala ngeqembu leqembu le-club ku-18th kaFebhuwari 2012 futhi emva kwalokho, ukubonakala okumbalwa emikhankaso yeCampeonato Brasileiro Série A kanye ne-2012 Copa Libertadores. Njengoba idalwe ngamarekhodi amahle aseKorinte namaqembu kazwelonke eBrazil, uMarquinhos wayesekupheleni kwe-2012 ethengiswa eRom lapho ephethe khona izenzo ze-26 Serie A ne-4 Coppa Italia ngaphambi kokuthutha eParis Saint Germain.
I-Marquinho Isayinwe i-PSG ngo-19th of July 2013. Amakhredithi: I-Sambafoot.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
I-PSG inikeze ithuba elisha elinamandla elinamaqhawe kuMarquinhos owayebonakala enqotshwe ukuphumelela, njengoba ehola umgomo wakhe wokuqala wokuqeqeshwa weqembu, ngesikhathi sokuqala esemthethweni ngesikhathi sokunqoba kwe-PSG sika-4-1 ngo-September 2013. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, uMarquinhos wahlangana ngokubamba iqhaza ngokufaka inhloso yakhe yokuqala eqenjini le-3-0 Champions League elwa noBenfica. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
UMarquinhos uye wazuza manje ngaphansi kwezihloko ze-5 ne-PSG. Amakhredithi: Instagram.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
UMarquinhos ngumuntu oshadile esikulethela imininingwane eyinhloko mayelana nokuphila kwakhe emshadweni kuhlanganise nendlela ahlangana ngayo wathatha umkakhe uCarol Cabrino. Ukuqala, umkaMarquinhos 'uCarrino akayena futhi wayengakaze abe ngumdlali webhola. Ungumculi wezemidlalo owenza umsebenzi wokucula nokuvame ukuqoshwa emahholo ayi-karaoke aseBrazil.
Ngesikhathi esisodwa salezi zinto ezibonakalayo ukuthi wabonakala kuyi-Brazilian version ye-X-Factor ebizwa ngokuthi i-Jovens Talentos ku-2014. Ukusebenza kwakhe embukisweni we-Tv show kwabanjwa uMarquinhos owamshesha ngokushesha nge facebook.
"Wangifaka ku-Facebook, wangibhalela nsuku zonke, wabeka amazwana ezithombeni zami."
Wembulela Canal +.
UMarquinhos wahlangana futhi waqala ukuphola nomkakhe uCarol Cabrino ku-2014. Amakhredithi: FabWags.
Le duo yaqala ukuphola ngemuva futhi yashada ngo-2nd kaJuly 2016. Lo mkhosi wawubanjwe ogwini e-Trancoso.
UMarquinhos wahamba phansi nomkakhe uCarol Cabrino ngo-2nd kaJuly 2016.
Umshado wabo ubusiswe ngendodakazi, uMaria Eduarda Cabrino Correa ozalwa ngosuku lwe-1st kaNovemba 2018. Kuyafaneleka ukuphawula ukuthi uCabrino waqala ukusebenza ngenxa yokuzalwa kwendodakazi yakhe ngenkathi eseParc des Princes stadium eFrance ukuze abukele uMarquinhos edlala umdlalo weMidlalo yeBafana ne-Anderlecht.
UMarquinhos Nomkakhe uCarol Cabrino nendodakazi kaMaria. Amakhredithi: Revista Quem.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
UMarquinhos wazalelwa emndenini onothando wezemidlalo we-5. Sikulethela imininingwane yangempela ngamalungu omndeni wakhe.
Ubaba kaMarquinhos: Ubaba kaMarquinhos akekho omunye umuntu kodwa uMarcos Barros Corrêa. UMarcos uyinto yonke eya kuMarquinhos ombheka njengeqhawe lakhe, umeluleki, umlingani wakhe, umngane, phakathi kwezinye izimfanelo zomuntu obaba kakhulu.
U-Marcos Barros Corrêa ungubaba nakho konke kumntanakhe uMarquinhos. Amakhredithi: Instagram.
Umama kaMarquinhos: U-Alina Aoás ungumama onothando nomnakekelayo okudunyiswa yiMarquinhos ngendlela elandelayo:
"Izingalo zakho zivame ukuvula lapho ngidinga khona. Inhliziyo yakho iyakwazi ukuqonda uma ngidinga umngane. Amehlo akho ebucayi aqina kakhudlwana lapho ngidinga isifundo. Amandla akho nothando kuye kwangikhombisa impilo yami wanginika amaphiko engingayidinga ukuwashayela indlovukazi yami ".
UMarquinhos uhlanganyela ngokubambisana kakhulu nonina u-Alina Aoás: Izimali: Instagram.
Mayelana nabantwana bakaMarquinhos:
Okwokuqala kubafowabo baseMarquinhos ungumfowabo omdala uLuan Aoás. Le duo yakhula ndawonye ihlanganyela izithakazelo ezivamile ebhola. Kodwa-ke, isinqumo sokuthi uMarquinhos uzodlula umfowabo emdlalweni. Noma kunjalo, basondelene kakhulu noMarquinhos echaza uLuan njengomzalwane ongcono kakhulu ongayicela.
UMarquinhos nomfowabo omdala uLuan. Amakhredithi: Instagram.
Udade kuphela u-Marquinhos yiRiama Aoás othandekayo omphatha njengenkosikazi emva komama wakhekazikazi.
Ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla: Umfowabo osekhulile uMarquinhos uLuan Aoás, udade osemusha uRiama Aoás noMarquinhos ngokwakhe. Amakhredithi: Instagram.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Yenzani imisebenzi yosuku olulinganiselayo empilweni kaMarquinhos oye wachazwa ngabangani njengoba kugxile ngobuntu obuhle kakhulu ?. Oqalayo, uMarquinhos uthanda ukuchitha isikhathi semfanelo nomndeni noma nini lapho ethola ithuba lokwenza kanjalo ikakhulukazi nendodakazi yakhe ekhula ngokushesha.
UMarquinhos unesibopho esiseduze noMaria wakhe indodakazi. Amakhredithi: Instagram.
Ukushiya ukuchitha isikhathi nomndeni, uMarquinhos uthanda ukudlala imidlalo yevidiyo nokusebenza ngaphandle. Imisebenzi ihlangene nayo iyamsiza ukuba athuthukise amaqhinga nokuqina okwenza lokho akakho ukuphakama njengomvikeli.
Imidlalo yevidiyo nokusebenza kuma-gyms kusiza i-Marquinhos Thuthukisa kumaqhinga nokuqina. Amakhredithi: Instagram.
Ukuqhubekela phambili ekunciphiseni amaqiniso awaziwa ngeMarquinhos, i-football genius inomdwebo onyawo lwakhe lwesobunxele. Ubuciko bomzimba obukhombisa izintende zezandla ezimbili eziqinisiwe zichazwe njengoBuzalwane Bokuphela KukaMarquinhos. Kubonisa ukubonga kwakhe ngobuqotho nokusekela emndenini nabangane.
UMarquinhos unomdwebo onyawo lwakhe lwesokunxele lapho echaza ngokuthi "Ubuzalwane obungunaphakade".
Ngaphezu kwakho konke, uMarquinhos ungumKristu ongokwenkolo okholelwa ukuthi amandla amakhulu kunazo zonke endaweni yonke yi-Faith !.
UMarquinhos uveza njengoKristuain futhi ubheka ukholo njengamandla amakhulu. Amakhredithi: Instagram.
Marquinhos Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts -I-Untold Biography Facts
Ngenkathi uMarquinhos eseRomania wadlala ngaphansi kwegama elithi "Marcos" ukuze agweme ukuphutha ngecala lakhe I-Marquinho (ngaphandle kokuthi 'S').
E-Roma, uMarquinhos wadlala negama elithi "Marcos". Amakhredithi: Instagram.
Ukuhlaziywa kwemali yakhe engu-€ 31.4 million yokudlulisela i-PSG kutholakale izindawo zokuxhumana eziphezulu ezididekile njengoba zichitha ukuhlukana okuhlukile. I-BBC Sport ithi inkokhelo ephezulu kakhulu yokudlulisela ingane ngesikhathi esifanayo ngenkathi i-Sky Sports ibike ngokuthi iyona ephakeme kunazo zonke zokudluliselwa okunjalo. Ngokufanayo, i-Le 10 Sport yaseFrance ibhalise njengowesithathu kakhulu ngesikhathi isiteshi sezindaba saseFrance i-BFM TV sichaza njengesihlanu esabiza kakhulu ngaso sonke isikhathi kumvikeli.
UMarquinhos ujabulela ubuhlobo obuseduze naye Thiago Silva oye waqhathaniswa ngaso sonke isikhathi futhi kwezinye izimo kuthiwa "u-Thiago Silva". Ngaphandle kokuqhathanisa, uMarquinhos ubheka uThoago njengomlingisi wakhe futhi kusobala ukuthi bobabili bajabulela ukuqonda okuqinile eParis Saint-Germain.
UMarquinhos ujabulela ubuhlobo obuseduze noT Thiago Silva. Izikweletu: Facebook.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Marquinhos Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
I-PSG Football Diary
I-Miralem Pjanic Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-Angel Di Maria Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
Thomas Meunier Childhood Indaba plus Untold Biography Facts